बेलैमा उपचार पाए ‘सबैजसो’ निको – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २६ बैशाख २०७८, आईतवार १०:०६
काठमाडौँ — बेलैमा उपचार पाएका कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये अधिकांश निको भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसले मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्ति लक्षण देखिएपछि पनि ढिलो गरी स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा पुगेकाहरू रहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार थपिएका संक्रमितको तुलनामा निको भएकाको संख्या ४०.०३ प्रतिशत छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकमा ८ हजार २ सय ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यही अवधिमा निको हुनेको संख्या ३ हजार ३ सय ७० छ । संक्रमणले हालसम्म ३ हजार ६ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । यो भनेको जम्मा संक्रमितको ०.९४ प्रतिशत हो । यसअघि मृत्युदर एक प्रतिशत थियो । पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढेकाले आवश्यक उपचार नपाएर वा ढिला गरी अस्पताल पुगेर ज्यान गुमाउनेका संख्या बढेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
पोहर जस्तै यसपालि पनि संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा सामान्य लक्षण छ । ‘यस्ता बिरामीलाई घरमै चिकित्सकीय सल्लाहमा उपचार गर्दा पुग्छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘बाँकीमध्ये १५ प्रतिशत मध्यमस्तरका बिरामी हुन्, उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्छ । ५ प्रतिशत गम्भीर खालकालाई आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
डा. दासले कोरोना संक्रमणले सामान्य निमोनिया भएकाहरू घरमै चिकित्सकीय सहयोग एवं सल्लाहमा उपचाररत रहेको र ५–७ दिनमा निको भइरहेको बताए । उनका अनुसार मध्यमस्तरको निमोनिया भएकाहरूलाई निको हुन ८ देखि १० दिन लाग्ने गरेको छ । गम्भीर निमोनिया भएकामध्ये करिब ६० प्रतिशतलाई निको हुन १० देखि १२ दिन र बाँकी ४० प्रतिशतलाई ३ देखि ५ सातासम्म लाग्न सक्छ । ‘भेन्टिलेटर नचाहिने गम्भीर निमोनिया भएकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म र भेन्टिलेटरमा रहेका १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बिरामी निको भइरहेका छन्,’ डा. दासले भने ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अधिकांश मध्यमस्तरका र गम्भीर बिरामी नै भर्ना हुने गरेको जानकारी दिँदै डा. दासले केही दिनदेखि यस्ता बिरामीमध्ये करिब २ प्रतिशतजतिको मृत्यु भएको देखिएको बताए । ‘संक्रमण चाहे सामान्य, मध्यम वा गम्भीर नै भए पनि समयमै उपचार प्रक्रियामा आउनेहरूमा निको हुने सम्भावना अत्यधिक छ,’ उनले भने, ‘कोभिडले मृत्यु भएकामा समयमै अस्पताल पुग्न नसकेको, ढिलो गरी पुगेका नै बढी छन् ।’
गत वर्षको पहिलो लहरको तुलनामा यस वर्षको दोस्रो लहरमा संक्रमितलाई छिटो निमोनिया भइरहेको पाइएको छ । सास फेर्न गाह्रो भए, ज्वरो सय डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भइरहे, अक्सिजनको मात्रा (९२ प्रतिशतभन्दा कम) धेरै तल–माथि भइरहे तुरुन्त चिकित्सकीय सल्लाह आवश्यक हुने डा. दासले बताए । ‘तर यस्तै लक्षण भएर पनि घरमै बस्ने र ढिलो भइसकेपछि अस्पताल आउने हुनाले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र्रिय क्षयरोग केन्द्रका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. नवीनप्रकाश शाहले पनि बेलैमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आएका सबैजसो निको भइरहेको बताए । ‘लक्षण देखिनासाथ अस्पताल वा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई ठीक छ । ढिलो अस्पताल जाने वा घरमै अक्सिजन उपयोग गर्नेलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ,’ उनले भने ।
डा. शाहले संक्रमितको छातीको एक्स–रे रिपोर्टमा दाग देखिए उपचार प्रक्रिया तुरन्त सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘एक्स–रेमा दाग छैन तर ज्वरो छ भने घरमा पनि निको हुन सक्छ,’ उनले भने । ५०–६० प्रतिशत फोक्सो बिग्रिएपछि उपचार थाल्नु धेरै ढिलो हुने उनले बताए । कोरोना संक्रमितको उमेर नहेर्न पनि डा. शाहले आग्रह गरे । ‘बिरामीको उमेर होइन, लक्षण हेर्नुस् र समयमै उपचार प्रक्रियामा सरिक गराएर सहजै ज्यान जोगाउनुस्,’ उनले भने ।
चिकित्सकहरूका अनुसार सामान्य समस्या भएका संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह सुझावबमोजिम घरमै प्रशस्त तातो झोलिलो खाना खाए, राम्रो निन्द्रा र तनावरहित अवस्थामा रहे निको हुन सक्छन् । उनीहरूले अनावश्यक औषधि र उपचार प्रक्रियामा अल्झिन नहुने पनि चिकित्सकको सुझाव छ । उनीहरूका अनुसार टाउको दुखे, ज्वरो आए उमेरअनुसार मात्रा निर्धारण गराएर पारासिटामोल खान सकिन्छ । अक्सिजनको अवस्था राम्रो राख्न पेटको बलले सुत्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
‘संक्रमित भई घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका धेरै जनाले अनावश्यक रूपमा एन्टिबायोटिक, विभिन्न प्रकारका भिटामिन, स्टेराइड औषधि सेवन गरेको पाइएको छ । तर यी कुनैको आवश्यकता नै छैन,’ डा. दासले भने ।